トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Hlola isici-umkhuba of pachinko emakhazeni [nail ukulungiswa nezinzipho IsAm ed.]
Lapho ngokuvamile waya ukudlala e sasemakhazeni pachinko, ngicabanga ukuthi siyokubona inhloso yokuqala nguye imodeli ngomunye. Ngakho, kuba ukulungiswa isipikili ngifuna nithole. Nail ukulungiswa, noma ngabe kukhona uzimisele ukucisha izitolo, futhi kuba ezibonakalayo isinqumo noma cha. Ngaphandle kunjalo, ezifana CR, ngoba enjalo Hanemono ngezinye izikhathi nail ukulungiswa ngobubanzi ihlukaniswe umphumela, abantu ngeke bakwazi ukudlula ukugwema isheke nail ukulungiswa okungukuthi ikakhulukazi umdlalo ukuze Hanemono isikhungo.
nail ukulungiswa, umphathi noma induna, futhi afeze ngomuntu othile, ezifana umculi nail evamile. I abambelele ebantwini, ikhona yize ngokuvamile ukuphila kukhona umkhuba. Iqiniso lokuthi umuntu esithile nawo lwenziwa emakhazeni pachinko Kuyaphawuleka ukuthi umkhuba wokushaya ukulungiswa by esitolo ngamunye liqinisekile. Uma Minukere umkhuba nail ukulungiswa, iphesenti ngokuwina Ziyoza kuka zifa ezifakelwa kumuntu.
Ngakho-ke, siyobe ukwethula ukubona ngokusebenzisa indlela nail ukulungiswa.
ukubona ngokusebenzisa ukulungiswa nail, ngokusebenzisa wamakhaza pachinko mayelana amasonto amabili komunye ngesonto ubuncane, uzodinga ukubona. Ekhuluma kungani, ngoba ukulungiswa nail wenziwa umehluko we amamilimitha angu ezimbalwa, hhayi Ika ngokuqinile ukuthi ukubonile lokhu iphuzu pin, wena miss. Beginners, hhayi ngokwanele ukuba sazi ukuthi isiqalo kusobala ukubukeka evulekile, lithi kunzima ukunquma whether're ngempela evulekile. Kungakhathaliseki evulekile ekunika emhlabeni izipikili of
isiqhingi, kuyinto ngokungenamibandela ngakho by esitolo ngamunye, alisho lapha, nokho, lapho ebuka nail kusukela phezulu, zama ukubheka lolu hlobo nail Sicela. Ngo
, kuba ukulungiswa nail isiqalo esihle kakhulu-okulula ukuyiqonda.
ukulungisa nail usezinhlelweni zokuqinisa umuzwa e pachinko eshintsha, omunye nail, kancane kuka ohlangothini chucker isiqalo, icala lapho nail siyeza ngaphandle. Endabeni lokhu kulungiswa nail, iyindawo ngokuthi izikhathi eziyisithupha kusukela ijubane ukujikeleza ka 1 iminithi mayelana 5 izikhathi. Ukulungiswa, sicela ucabange nail nezinguquko ezivamile ukuguqulwa okusezingeni eliphezulu isilinganiso pachinko eshintsha.
Uma okunye kokuqina, qala Chat Kanye zombili imoto, uzobona kuyendlulela kokubili nail. Endabeni lokhu kulungiswa nail, iyindawo ngokuthi izikhathi eziyisihlanu kusukela ijubane ukujikeleza ka 1 iminithi mayelana 4.6 izikhathi. Ngosuku ukuqoqwa, uma ufuna nakanjani inzalo enkulu, qaphela ngoba ukulungiswa isipikili livela kwezinye izindawo. Uma onjalo wayeshaya izinzipho kokuqina, kuyoba basheshe baqeda Nante ayizinkulungwane yen. Ngo
, ukubheka nail kusukela phezulu ephambene, nail noma omunye izinzipho, avulekele ngaphandle ngaphandle chucker isiqalo ngisho kancane kuyinto nail ezinhle. Uma ubheka zivela phezulu, umehluko osobala ungabona. Lokho ngokuvamile ubonakala nail ukulungiswa ukuze izenzakalo ezinjalo. Kulokhu, ijubane ukujikeleza ka 1 iminithi kuzosuka mayelana 6 izikhathi izikhathi ezingu-7. On zombili
izinzipho, noma evulekile kungabonwa, kuyoba abantu umkhuba ukulungiswa nail. Esikhathini pachinko esitolo ukuvakasha kuwo wonke umuntu, kokubili ukuthi kokuvula nail, sicela uzame ukuhlola.
Ngaphezu kwalokho, kancane ngaphambili ngaphansi wokudonsa, kukhona izindawo lapho kukhona igebe phakathi nail futhi nail.
zombili nail igebe, nail Yini embi ngalo okungukuthi, ngaphambi kokuya ekuqaleni, siye kwalungiseka, ezifana ibhola uwa lapho. Nail ukulungiswa, ngoba wakha lonke ebhodini, hhayi nje uqale, nail ohlangothini Sikukhuthaza ukuzama ukuqinisekisa.
Ngisho noma ungazange ukubheka izinzipho kuze kube manje, nail eyisisekelo ukuthi ulibuka phezulu, ngicabanga uma ukunaka ikhokhelwa nomunye Slingshot ukujabulela ikani. Iyindawo ukuthi izikhathi izikhathi 5 kusuka 6. Ngosuku ukuqoqwa, uma ufuna nakanjani inzalo enkulu, qaphela ngoba ukulungiswa isipikili livela kwezinye izindawo. Uma onjalo wayeshaya izinzipho kokuqina, kuyoba basheshe baqeda Nante ayizinkulungwane yen. Ngo
Ngisho noma ungazange ukubheka izinzipho kuze kube manje, nail eyisisekelo ukuthi ulibuka phezulu, ngicabanga uma ukunaka ikhokhelwa nomunye Slingshot ukujabulela ikani. Kunconywa ukuthi uzama.
Ngisho noma ungazange ukubheka izinzipho kuze kube manje, nail eyisisekelo ukuthi ulibuka phezulu, ngicabanga uma ukunaka ikhokhelwa nomunye Slingshot ukujabulela ikani.